Laanta Socdaalka ee Migrationsverket oo go'an kasoo saartay Sharciga Dhalinyarada ee ku meel gaarka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaLaanta Socdaalka ee Migrationsverket oo go’an kasoo saartay Sharciga Dhalinyarada ee ku meel gaarka
February 27, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Wakaaladda socdaalka ayaa dhaleeceysay soo jeedinta dowladda ee ku saabsan wax ka beddelka sharciga dugsiga sare ee loo yaqaan gymnasielag, waxayna sheegtay in uu yahay mid aan caddayn isla markaana ay adkaan doonto in la qiimeeyo sida dhalinyarada aan lala socon ay u heli karaan Sharciga rasmiga iyadoo go’an ay kasoo saartay la wadaagtay Dowlada.
Dowlada ayaa soo jeedisay in la fududeeyo shuruudaha caruurta yar yar ee aan lala socon si ay degenaansho uga helaan Iswiidhan. Hindisaha dowladda waxaa ka mid ahaa in la kordhiyo muddada shaqo raadinta iyo in la tixgeliyo lacagta ay ka helaan Hay’ada CSN Dowlada ayaa sidoo kale soo jeedisay inay siiso degenaansho rasmi ah xitaa hadii shaqadooda ay kujirto mudo tijaabo ah.
Hindisayaasha dowladu waxay noqon doonaan ka dhaafitaan ku meel gaar ah sharciga “dugsiyada sare”, iyadoo taas qiil looga dhigayo iyadoo la sheegayo in xaalada suuqa shaqada ay noqotay mid aad u adag intii lagu jiray cudurka faafa ee Corona sidaas darteedna ay adagtahay in shaqo la helo.
Sharciga Dugsiga Sare ayaa la ansixiyay 2018 wuxuu u ogolaaday kumanaan magangalyo doon ah oo aan lala socon kuwaas oo codsiyadooda loo diiday inay sii joogaan Sweden si ay wax uga bartaan dugsiyada sare. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa markaa heli kara deganaansho rasmi ah haddii ay shaqo helaan. Sharciga ayaa dhigaya in mudada shaqadu ay tahay labo sano, halka dowlada ay dooneyso in laga badiyo, Socialdemokraterna iyo deegaanka, bishii October ee la soo dhaafay ay soo jeediyeen in mudada shaqadu ay tahay hal sano oo kaliya halkii ay ahayd laba sano, taas oo ay ka soo horjeesteen inta badan xisbiyada.
Websaytka Wakaaladda Socdaalka ayaa sheegaya in Sharciga Dugsiga Sare uu khuseeyo dhalinyarada da’doodu u dhaxayso 17 ilaa 24 sano.
Hay’adda laanta socdaalka ayaa hadda gudbisay jawaabteeda la talinta ee ku saabsan soo jeedinta dowladda ee wax ka bedelka sharciga. Carl Bixelius, oo ah sarkaal sharciyeed oo ka tirsan waaxda ayaa yidhi “Qiimayntayadu waxay tahay inaan arki doono koror cayiman tirada dadka codsada deganaanshaha rasmiga ah”. “Laakiin way adag tahay in qiimeyn lagu sameeyo tirada saxda ah.” Sida uu soo xigtay TT.
Soo jeedinta dowlada ayaa dhalisay muran weyn Sweden, gaar ahaan ka dib markii xisbiga Centerpartiet ee taageeray dowlada uu ku dhawaaqay diidmada soo jeedinta. Taas macnaheedu waxa weeye in soo jeedinta ay taageero ka waayi doonto baarlamaanka Sweden.
Hay’adda laanta socdaalka ayaa rumeysan inay adkaan doonto in la qiimeeyo muddada dakhliga ka soo xarooda lacagaha CSN oo ay rabto inay caddeyso tan. “Deeqaha waxbarasho waxaa la bixin karaa ugu badnaan 53 usbuuc markiiba, dakhliguna ma noqon karo mid joogto ah haddii qofku qaadanayo koorsooyin goos goos ah,” ayuu yiri Pixelius. Su’aashu waxay tahay sidee ayaan u qiimeyn karnaa mudada kiiskan. ”
Hay’addu waxay sidoo kale ka soo horjeesatay soo jeedinta ah in muddada shaqo raadinta laga dhigo hal sano halkii laga dhigi lahaa lix bilood, iyadoo loo arko inay sidoo kale madmadow ku jirto.